Mukhtaar Rooboow oo iska diiday amarkii Wasaarada amniga Somaliya – Banaadir weyne
Mukhtaar Rooboow oo iska diiday amarkii Wasaarada amniga Somaliya
07 Oktoobar, 2018
Kuxigeenkii hore ee Hogaamiyaha Al-Shabaab, Mukhtaar Rooboow Cali (Abuu Mansuur), ayaa ka dhego fureystay amarkii maalin ka hor ka soo baxay Wasaarada amniga gudaha Somaliya, kaasoo ahaa inaanu u tartami karin doorashada Koofur Galbeed.
Rooboow, oo Baydhabo Khamiistii gaaray, ayaa iska sii wata ololihiisa doorasho, Isagoo maanta dhigtay munaasabad ay ka soo qeybgaleen boqolaal kamid ah taageerayaashiisa.
Rooboow, waxa uu munaasabadii maanta mar kale ka sheegay inuu yahay Musharax u taagan doorashada Baydhabo ka dhaceysa 17-ka Bisha soo soocta ee November, hadaan Jadwalka waxba iska badalin, Hadalkii Wasaarada amniga ayuu ku sheegay ineysan waxba ka quseyn waxa Baydhabo ka socda.
Rooboow, waxa uu tilmaamay inuu diirada saari doono 3 arin oo waaweyn, hadii uu ku guuleysto loolanka adag ee uu kala kulmayo ku dhowaad 10 Musharax.
” Waxaan ku celinayaa maanta inaan musharax u ahay madaxtinimada Konfur Galbeed waxaan Ka shaqeyndoonaa sedex qolo oo Wadooyinka ay u xiranyihiin hadii aad i doorataan”, ayuu yiri Rooboow.
Saddexda qolo ee uu xooga saari doono wax ka qaabshadooda, ayuu ku kala sheegay:
1- kooxda qawaarijta oo wado badan xirtay baneysteyna dhibaateynta shacabka.
2-qabaa’ilaadka qaar oo wadooyin u xiran.
3- Iyo dadka wata dharka ciidanka dowlada oo shacabka dhibaateeya.
Lama oga, Waxa Dowladda ay ka dhihi doonto dadaalada iska sii socda ee uu Rooboow ka wado Magaalada Baydhabo, Rooboow maanta waxaa madasha laga tumayay Heeso akala duwan, Isagoo goobta fadhiya, Markii Khudbadiisa la siiyayna waxaa la garaacay Astaanta Qaranka.
Sidoo kale waxaa dhabarkiisa taagnaa, laba qof oo midi Haweeney tahay oo xiran ookiyaalo madoow, Waxey ahaayeen ilaalo u gaar ah, sidaas waxaa sameeya Madaxda dowladda iyo kuwa Gobolada.
Halkan ka Aqriso Wareegtadii Wasaarada amniga ee Rooboow ka dhanka eheyd:
– Universal Somali TV | Daabacaada: 06 Oktoobar, 2018